खुसिको खवर : भारतले दिएको कोरोनाविरुद्धको खोप काठमाडौँ आइपुग्यो , पहिले कस्ले लगाउने ?: सेयर गर्नुहोला । -
Home News खुसिको खवर : भारतले दिएको कोरोनाविरुद्धको खोप काठमाडौँ आइपुग्यो , पहिले कस्ले...
खुसिको खवर : भारतले दिएको कोरोनाविरुद्धको खोप काठमाडौँ आइपुग्यो , पहिले कस्ले लगाउने ?: सेयर गर्नुहोला ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रुपमा विकास गरेको ‘एजेडडी१२२२’ नामक खोपलाई भारतको एसआईआईले ‘कोभिसिल्ड’को नाममा उत्पादन गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार पहिलो चरणमा आउने खोप कोभिड–१९ विरुद्ध अग्रपंक्तिमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलगायत सुरक्षाकर्मीहरुलाई दिइने छ ।
औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए)ले ‘कोभिसिल्ड’लाई गत शुक्रबार नै आपत्कालीन प्रयोगका लागि ससर्त अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । भारतबाट प्राप्त हुन लागेको यो खोपलाई २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६ महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । नेपालका लागि भारतीय राजदुत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्यमन्त्री हृदेश त्रिपाठीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा खोप हस्तान्तरण गरेका छन् ।
खोप अभियान चलाउनका लागि प्रशासनिक र आर्थिक जटिलता नरहेकोले तुरुन्तै खोप अभियान चलाउन तयार रहेको मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी गराएका छन् । नेपालले एक साता भित्रनै कोरोना खोप दिइने सबै जिल्लामा खोप पुर्याउने बताएको छ । तर खोप कहिले देखि लगाउन शुरु गरिन्छ भन्ने बारेमा भने मन्त्रालयले अझै स्पष्ट गरेको छैन ।
भारतले भूटान, बङ्गलादेश, माल्दिभ्स, म्यान्मा र सेसेल्सलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अनुदान सहायता स्वरुप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
Previous articleपदभार सम्हाल्ने बित्तिकै बाइडेनले गरे ठूलो निर्णयमा हस्ताक्षर, अमेरिकामा छायो खुशीयाली Joe Biden
Next articleअनिताको हात गो’डानै च’ल्न थालेपछि उनको उप’चार गर्ने डा’क्टर पहिलो पटक मिडियामा, बल्ल फर्कियो परिवारमा खुसि